Semalt Expert: Inona ny Tranonkala amin'ny tranokala?
Tolotra fanodinana tranokala ampiasaina amin'ny fanesorana na fanasaziana angona avy amin'ny tranonkala samihafa pejy ao amin'ny World Wide Web, ary tafiditra amin'izany ny famahanana ireo angon-drakitra voarakitra ao anaty tahiry iray manontolo mba hahamora ny fikarohana, ny fikarakarana sy ny fanivanana. Azonao atao ny mampiasa ny tolotra tranonkala ao amin'ny tranonkalanao mba hamehezana ireo angona rehetra ilainao amin'ny pejy rehetra amin'ny tranonkala loharano. Ny serivisy koa dia manangona ny angon-drakitra ho tahiry, tahiry, na endrika hafa.
Na inona na inona tanjonao, dia afaka mandrindra izany asa izany ny asa fanasitranana. Te hanara-maso ny vidin'ireo mpifaninana ve ianao? Te hampitaha ny fifanarahana ve ianao na ny tahirin-tsarinao? Ny tolotra fanoratana tranonkala dia mila anao. Mila mamaritra ny toerana sy ny singa ilaina ianao. Ny angon-drakitra dia tsy ho tratra ho anao fotsiny ihany, fa ho azo ampitaina amin'ny endrika tianao kokoa.
Fanamparana tarehimarika madinika
Ity tolotra ity dia azo ampiasaina hanesorana na fanisahana tarehimarika madinika mifandraika amin'ny vokatra manokana. Ohatra, misy ny tahiry marobe, ary manohy miova tsy tapaka ny teniny sy ny vidiny. Raha manana na liana amin'ny tahiry vitsivitsy ianao ary te-hanara-maso ny vidin'ny vidiny sy ny quotes, mety mila mampiasa ity serivisy ity ianao. Raha miova ny tarehimarika amin'ny tranokalan'ny loharano, dia hijery ny tranokalanao koa izy ireo. Izany dia hamonjy anao ny fanaintainan'ny fihazakazaka amin'ny lisitra lava be tany am-boalohany matetika.
Maro ny olona manara-maso ny tahan'ny fidiram-bola avy amin'ny orinasa isan-karazany..Ny fanamby amin'io dia ny fanamarihan'izy ireo matetika ny tranonkala maro. Mety ho sarotra ny fampitahana ny taham-pahaizana amin'ny tabilao miavaka. Izy ireo dia tokony hanindry ny tabilao aorian'ny tabilao. Saingy mora kokoa amin'ny serivisy tranonkala izany. Afaka mahazo izany izy ireo amin'ny pejy iray miovaova. Ny fanaraha-maso ny tahan'ny fidiram-bola dia mora kokoa amin'ny fanaovana pejy iray. Ny serivisy tranonkala dia hanampy anao hamafa ny taham-pahalalana amin'ny tranonkala samihafa ary hameno ny angona rehetra miaraka amin'ny pejy iray ho anao. Tsarovy fa rehefa mivoatra amin'ny vidin'ny tranonkala ny vidin-tsavony dia havaozina koa ny dika mitovy anao.
Fanampiana ny vidiny sy ny sarin'ireo vokatra isan-karazany amin'ny tranokala fivarotana
Ohatra, mividy fivarotana matetika ny olona. Azonao ampiasaina ity serivisy ity mba hikapoka ny vidin'ny entana amin'ny tranokala isan-karazany amin'ny fampitahana. Ary ho hitanao hatrany ny vaovao farany. Noho izany, isaky ny te-handeha hividy entana ianao, dia hijery ny rakitra fotsiny ianao ary hijery ny fivarotana amin'ny best deals. Azonao atao ny manapa-kevitra ny hividy karaoty ao amin'ny Shop A, ary ny Tavy Green avy amin'ny Shop B, sns.
Fanampiana sary avy amin'ny saripika sary, exhibitors, na tranokala fampakaram-bady
sary vongana avy amin'ny tranonkala samihafa izay feno sary maro. Ny sasany amin'ireny tranonkala ireny dia ny tranokalan'ny sarimihetsika, ny fampakaram-bady, ary ny mpizahantany fotsiny mba hiresahana vitsivitsy.
Tsy mora ny fampidirana ao amin'ny fampiharana efa misy
Ny angona azo ampiasaina amin'ity serivisy ity dia mora mora tafiditra amin'ny fampiharana rehetra. Ny data dia azo ampidinina ao amin'ny takelaka, programa dokam-barotra, CSV, na zavatra hafa natsangana. Azonao ampiasaina ihany koa ny serivisy hanakarana ny angona avy amin'ny tranokala azo antoka izay manakana ireo mpikambana tsy mpikambana.
Na inona na inona antony ilanao ny serivisy, dia mifandraisa amin'ny orinasa amin'ny vidiny sy ny fotoana voatondro amin'ny fahatongavanao ho an'ny tranonkala fanadiovana anao Source .